US idobe ókèala ala na Canada na Mexico mechie ruo Septemba 22
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » US idobe ókèala ala na Canada na Mexico mechie ruo Septemba 22
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Iji belata mgbasa nke COVID19, gụnyere ụdị Delta, United States na-agbatị mmachi na njem na-adịghị mkpa na ala anyị na njem ụgbọ mmiri na Canada na Mexico ruo Septemba 21.
USA gbatịpụrụ mmechi ókèala Mexico na Canada.
Ala dị na Mexico na Canada ga -emechi ruo Septemba 22
Ọchịchị Biden nọ na nrụgide ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke azụmahịa na-ebute ịmalitegharị ókèala.
N'agbanyeghị nrụgide ndọrọ ndọrọ ọchịchị na azụmahịa na-eduga, ochichi Biden yiri ka ọ naghị eme ngwa ngwa belata mmachi na nkwụsị ala US na Canada na Mexico, nke emechiri maka njem ezi uche.
Ndị ọrụ gọọmentị US kwupụtara taa, na agbanyeghị mkpebi Ottawa mepere ndị America ọgwụ mgbochi, mmechi nke ókèala ala US na Canada na Mexico agbatịwo na njem na-adịghị mkpa dị ka njem nlegharị anya ma ọ dịkarịa ala Septemba 21.
“Iji belata mgbasa nke #COVID19, gụnyere ụdị Delta, United States na-agbatị mmachi na njem adịghị mkpa na njem anyị. ala na ụgbọ mmiri gafere na Canada na Mexico rue Septemba 21, ka ị na -aga n'ihu hụ na ọrịre azụmaahịa na njem dị mkpa, ” Ngalaba nchekwa ala nke USy dere na Twitter.
"Na nhazi na ahụike ọha na ndị ọkachamara ahụike, DHS na -aga n'ihu na -eso ndị mmekọ ya n'ofe United States na mba ụwa na -arụkọ ọrụ ọnụ iji chọpụta ka esi amalite njem njem n'enweghị nsogbu ọ bụla."
Onye isi oche ndị isi njem njem nke United States na -ahụ maka ọhaneze na amụma Tori Emerson Barnes wepụtara nkwupụta na -esote na ọkwa na United States agbatịla ihe mgbochi ókè na Mexico na Canada:
“Mmachibido njem anaghịzi echebe anyị pụọ na nje - ọgwụ mgbochi. Kwa ụbọchị na oke ala anyị ka emechiri emechi, ọ na -egbu oge mgbake akụ na ụba America na ọrụ, na -ebute mbibi dị ukwuu na nde mmadụ nke ndụ ha dabere na njem na njem.
“Maka ọnwa ọ bụla ọnọdụ ahụ na -aga n'ihu na ókèala Canada, ahịa isi mmalite nke 1 nke ndị mbata na -abata, United States na -efufu ijeri $ 1.5 na mbupụ njem njem, na -ahapụ imirikiti azụmaahịa America adịghị ike.
A chọrọ mgbochi mgbochi ngwa ngwa tupu ọgwụ mgbochi COVID-19 dị irè, mana mmechi ndị a nwere ọnụ ahịa dị elu-mfu nke ihe karịrị nde ndị America 1 na ijeri $ 150 na ego mbupụ n'afọ gara aga naanị. "